အကောင်းဆုံးရာသီဥတုရှိသောကနေဒါနိုင်ငံများ Absolut ခရီးသွား
Susana မာရီယာ Urbano Mateos | | ကေနဒါ
ကနေဒါသည်အလွန်ကြီးမားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအလွန်ကွဲပြားသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်း '' ကနေဒါရာသီဥတုရှိကွောငျး။“ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဟာအနောက်ဘက်ကမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသတွေနဲ့တောင်တန်းဒေသတွေကကွဲပြားတဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နေရာတွေမှာတစ်နေ့တည်းမှာတွေ့နိုင်တဲ့အပူချိန်နဲ့အချိန်ဟာအရှေ့ပိုင်းရွက်ကြွေသစ်တောfromရိယာနဲ့အလွန်ကွာခြားပါတယ်။ ¿ကနေဒါနိုင်ငံရှိမည်သည့်မြို့များသို့အလည်အပတ်သွားရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည် နှစ်တစ်နှစ်၏အချိန်နှင့်အညီ?
မေမှစက်တင်ဘာ ယေဘုယျအားဖြင့်ကနေဒါ၏လူ ဦး ရေနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသုံးပြုသောရာသီဖြစ်သည် အပြင်မှာစခန်းချခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာ; ထိုရက်စွဲများမှမည်သည့်လများမဆိုသင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုခရီးသွားနိုင်သည်၊ သို့သော်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်သော်လည်းအပူချိန်တိုးလာခြင်းကိုစတင်ခံစားရခြင်းသည်နှေးကွေးသောရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။ သောဖြစ်ခြင်း, အကြာတွင်နွေးနေလိမ့်မယ် နိုဝင်ဘာလနှင့်မတ်လအကြားနှင်းလျှောစီးနှင်းလျှောစီးရာသီနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်မုန်တိုင်းများပေါ် မူတည်၍ Aprilပြီလအထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
1 ကနေဒါရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်။ အံ့သြစရာအချက်အလက်များ
3 နွေရာသီမှာလား အအေးဆုံးရာသီဥတုနှင့်အတူကနေဒါမြို့ကြီးများ
ကနေဒါနိုင်ငံဟာအအေးဆုံးနိုင်ငံပါနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်အပူချိန် -5 / -6ºCနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အအေးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရုရှားနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံမှစာရင်းအင်းများအရအခြားသဘာဝဖြစ်ရပ်များထက်အပူလွန်ကဲသောအပူချိန်နှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကနေဒါနိုင်ငံသားများသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်ရေအေးမှနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှလူ ၁၀၈ ဦး သေဆုံးနေပြီး ၁၇ ယောက်ကသာသဘာဝနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအဖြစ်အပျက်များကိုလက်လွှတ်လိုက်ရသည်။
၏မဟာဘဏ်များ နယူးဖောင်လန် စဉ်းစားသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဝေးဆုံးနေရာ။ areaရိယာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆောင်းရာသီတွင်မြူဖုံးလွှမ်းပြီး ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်နွေရာသီတွင်ဖြစ်သည်။
ယင်းသည်လူသိများသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်သည် လတ်ဆတ်တဲ့ရာသီဥတုကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်းကိုတီထွင်သူများဖြစ်ပြီးနေလောင်ခြင်းရောင်ခြည်တွင်နေ၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပြင်းအားကိုတိုင်းတာခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှနေရောင်ခြည်များသည်အရေပြား၊ မျက်လုံးများနှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပိုမိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဒါသိပ္ပံပညာရှင်များ အညွှန်းကိန်းကိုကနေဒါလူမျိုးများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့ပြီးယခုအခါ၎င်းကိုနိုင်ငံအ ၀ ှမ်းနေရာ ၄၈ ခုတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ကနေဒါတွင်ပြောသောစကားတစ်ခွန်းရှိသည် "ရာသီဥတုကိုသင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ပါ။ " ဒါဟာထက် truer ပါပြီဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး သစ်ပင် Creek အဘိဓါန်, အယ်လ်ဘာတာ; ကနေဒါသမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောနေရာဖြစ်သည် မာကျူရီသည်-19ºCမှ22ºCအထိမြင့်တက်ခဲ့သည် ဒါအတွက် တစ်ခုတည်းပဲ နာရီ။
နောက်မှသိရလိမ့်မယ် ကနေဒါ၌အနွေးဆုံးသောမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည် ဆောင်းရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီတွင်အေးသောရာသီဥတုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုသွားသည့်နှစ်၏အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းကိုစီစဉ်နိုင်သည်။
အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တွေ့နိုင်သည့်မြို့ကြီးဖြစ်သည့်ကနေဒါဆောင်းတွင်းနွေးထွေးသောရာသီဥတုကိုရှာဖွေရန် ကျောက်တောင်များဤရာသီ၏လများအတွင်းနေ၏အနောက်တောင်ဘက်ရှိမြို့ကြီးသုံးမြို့တွင်နေ၏အပူကိုထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ ငါတို့ရှာနေတဲ့ဟာကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးဗစ်တိုးရီးယား၊ ဗန်ကူးဗားနှင့် ကဗျာ.
ကနေဒါ၏ဤမြို့ကြီးများအတွက်အမြဲ နွေးပြီးနွေးထွေးတဲ့ညတွေတွေ့လိမ့်မယ် နိုင်ငံ၏ဒေသများစွာထက်အပူချိန်နိမ့်နိမ့်နိမ့်ကျသည့်နှင်းခဲများနှင့်ညများသည်ပိုနည်းသည်။
ကနေဒါ၏အခြားဒေသများတွင်ဆောင်းရာသီအတွက်အနွေးဆုံးသောမြို့များမှာထိုတွင်တည်ရှိသည် ကနေဒါနိုင်ငံအွန်တာရီယိုပြည်နယ်နှင့်ရေကြောင်းပြည်နယ်များ။ သူတို့ထဲတွင်, အွန်မြို့ကြီးများ တိုရွန်တို, ဝင်ဆာနှင့်စိန့် ကက်သရင်း, အရာကြွင်းသောအရာထက်တသမတ်တည်းပူနွေးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီဥတုရှိခြင်းများအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်။
ဗစ်တိုးရီးယားသည်အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ကနေဒါအတွက်ကြီးမားသောမြို့ကြီးများ အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌နွေးထွေးမှုအဘို့။ ပူနွေးသောရာသီဥတုကြောင့်၎င်းသည်အခြားသူများထက်ဒီဂရီနှင့်ရက်များစွာကြာသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားသည်တစ်ခုတည်းသောကနေဒါနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဆောင်းရာသီတွင်အပူချိန် -10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (14 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အောက်သို့ပုံမှန်မကျစေရန်ခွင့်ပြုထားသည့်ကြီးမားသောကနေဒါနိုင်ငံဖြစ်သည်။
နယူးဖောင်လန်၏စိန့်ဂျွန် နွေရာသီမှာအအေးဆုံးရာသီဥတုရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်ဒါဟာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှနေ့စဉ်အပူချိန်ရှိပြီးဇွန်လ၊ ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လများတွင်ပူပြင်းသည့်ရက်အနည်းဆုံးရရှိသည်။
နယူး brunswick, ရုံရုံအခြားမဟုတ်ပါဘူး ကနေဒါ၏အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ, ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းပြည်အတွက်နိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှအားနှင့်အနိမ့်ဆုံးပူပြင်းရက်တွက်ချက်ရန်နွေရာသီအပူချိန်တိုင်းတာအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ဖို့လည်းအသုံးပြုသည်။
ဒါ့အပြင်တသမတ်တည်း အားလုံးစံထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ် မြို့တစ်မြို့ကငါတို့ကိုပေးမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်တယ် "နွေရာသီအေး" သည်အယ်လ်ဘာတာ Calgary၊ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာရှိ Edmonton၊ Alberta နှင့် Victoria နှင့် Vancouver ။ ဤအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သောကနေဒါမြို့များသည်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့ပြropolရိယာများဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အကောင်းဆုံးရာသီဥတုနှင့်အတူကနေဒါမြို့ကြီးများ
Lourdes Rizo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဗစ်တိုးရီးယားတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ မည်မျှဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Lourdes Rizo အားပြန်ပြောပါ
Carmen Morales placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်အလုပ်ရှာနေစဉ်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ နေ၍ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မည့်သူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Carmen Morales အားပြန်ပြောပါ
ကနေဒါမှာနေချင်ပါတယ် ကျွန်မယောက်ျားကရှေ့နေတစ်ယောက်။ ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အသက် ၁၇ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်ရှိကလေး ၃ ယောက်နှင့် ၄ လအရွယ်ကလေးရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကဘာတွေလဲ။
Fabiana, ငါဟာမင်းနဲ့အတူတူပဲ။ မင်းဘယ်မြို့ကလဲ။ ငါကနေဒါကိုသွားဖို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့ငါစိတ်ပူတာကမင်းမှာအဲဒီမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်
အဟောင်း MILENA ဘော်စတွန်ကက်စထရို ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘိုလီးဗီးယားမှအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၏ Miilena ပါ။ စီးပွားဖြစ်ငါဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါကနေဒါကိုသွားဖို့အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ဘဝနဲ့ငါ့သားရဲ့စီးပွားရေးအနာဂတ်ကပိုကောင်းတယ်။ အမှန်တရားကဒီမှာဘိုလီးဗီးယားမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူကိုတန်ဖိုးမထားဘူး၊ လစာအရမ်းနည်းတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကိုတောင်တည်ဆောက်ရန်မလုံလောက်ပါ။
ငါအွန်တိုရီယိုမှာရှိတဲ့ Toronto, Windsor နဲ့ Catharines မြို့တွေမှာနေထိုင်ချင်ပါတယ်
ELDY MILENA BASCOPE CASTRO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
Lizbeth engel ဟုသူကပြောသည်
ငါနေထိုင်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကနေဒါသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်တွင် ၅၇ နှစ်ရှိပြီး၊ ဤအသက်အရွယ်၌သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းနှင့် ၁၇ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များကဲ့သို့ဘာအလုပ်မျိုးကိုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း လုပ်တယ်
Lizbeth Engel အားစာပြန်ပါ
Elvy Del Carmen Doria Ll ဟုသူကပြောသည်
Elvy Del Carmen Doria Ll ကိုစာပြန်ပါ
Jhon jairo garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာညနေခင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုလံဘီယာ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာဂျွန်ဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးကျောင်းဆရာနှင့်အလုပ်မန်နေဂျာ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄၈ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဇနီးမှာ ၃၁ နှစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ကလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ကနေဒါသို့သွားလိုသည်။
Jhon jairo garcia သို့စာပြန်ပါ
ပဲရစ် Antoniano ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်မက္ကဆီကန် / စပိန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးလက်သမားအဖြစ်အလုပ်ရှာရန် (ဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ပရိဘောဂဟုခေါ်) မက္ကဆီကိုတွင်နေထိုင်သည်။ ငါ့မှာအတွေ့အကြုံ ၁၂ နှစ်ရှိတယ်။
Paris Antoniano အားပြန်ကြားပါ
Diana Duran ဟုသူကပြောသည်
Diana Duran အားပြန်ပြောပါ